बोइङले तिव्र गतिमा उड्ने नयाँ डिजाइनको विमान ल्याउँदै
२६ पुस - बोइङले निकट भविष्यमा तिव्र गतिमा उड्ने नयाँ विमान ल्याउने भएको छ। बोइङले नयाँ डिजाइन भएको विमानको नमूना सार्वजनिक गरेको हो।
अन्तरिक्षबाट प्राप्त भयो अनौठो रेडियो संकेत
२६ पुस - खगोल विज्ञहरुले अन्तरिक्षबाट अनौठो रेडियो संकेत प्राप्त गरेको बताएका छन्। क्यानडेली विज्ञहरुले आफूहरुले टाढा अन्तरिक्षबाट उक्त संकेत प्राप्त गरेको बताएका हुन्।
खगोल विज्ञानबारे चेतना जगाउन सातै प्रदेशमा कार्यक्रम
काठमाडौं २५ पुस - विश्वव्यापी रुपमा बिहीबारबाट शुरु हुने ‘खगोल विज्ञानका १०० घण्टा’ अभियानअन्तर्गत नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम हुने भएको छ।
फाइभ-जीको सुरुवात हुन नपाउदै चीन सिक्स-जी अनुसन्धानमा
नानजिङ २५ पुस - विश्व फाइभ–जी मोबाइल सन्जालमा प्रवेश गर्न नपाउदैै चीन सिक्स–जी मोबाइल नेटवर्कको अनुसन्धानमा लागेको छ।
अब एप्पलको आइ ट्यून एप सामसुङमा
२४ पुस - विश्वका दुई ठूला प्रविधि कम्पनी एप्पल र सामसुङबीच सहकार्य भएको छ। दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङले अमेरिकी कम्पनी एप्पलको ‘आइ ट्यून’ सफ्टवेर आफ्नो उपकरणमा उपलब्ध गराउने भएको हो।
राइटआउन्स गेमः खेल खेलमै ज्ञान
काठमाडौं २३ पुस - राइटआउन्स गेमः यो इन्ड्रोएड मोवाइलमा डाउनलोड गरेर खेल्न सकिने मोवाइल गेम हो। जसमा अंग्रेजी शब्द मिलाएर खेल्न सकिन्छ। यसमा ठाउँ विशेष तथा कुनै स्थानमा रहेका मौलिक कुराहरुको तस्वीर राखिएको हुन्छ त्यसलाई शब्द मिलाएर यो गेम खेल्न सकिन्छ।
शाओमीले ल्याउने अत्याधुनिक थ्री–फोल्ड स्मार्टफोन
२३ पुस - चिनियाँ मोबाइल निर्माता कम्पनी शाओमीले थ्री–फोल्ड स्मार्टफोन ल्याउने तयारी गरेको छ।
भारतीय वैज्ञानिकले आइन्सटाइन र न्यूटनको सिद्धान्तमा धावा बोले
दिल्ली २३ पुस - भारतका वैज्ञानिकहरुले चर्चित वैज्ञानिक अलवर्ट आइन्सटाइन र सर आइजक न्यूटनको सिद्धान्तमा धावा बोलेका छन्।
जुकरबर्गलाई अमेरिकी सिनेटरको चेतावनीः फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ
२२ पुस -
अन्तरिक्षमा सुपर पावर बन्ने चीनका अस्त्र
२१ पुस - चीनले चन्द्रमाको सबैभन्दा परको क्षेत्रमा आफ्नो रोवोटिक अन्तरिक्ष यान सफलतापूर्वक अवतरण गराएको दाबी गरिसकेको छ।
चीनलाई काउन्टर दिनेगरी भारतले स्थापना गरेको स्याटलाइट प्रयोग गर्ने नेपालको तयारी
काठमाडौँ २१ पुस - चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न भारतले सामरिक उद्देश्यका साथ स्थापना गरेको साउथ एशिया स्याटलाइटको स्पेशलाई प्राकृतिक प्रकोपको आपतकालिन सूचना आदान–प्रदानमा प्रयोग गर्ने गरी तयार नेपाल सरकारले गरेको छ।
किन कमजोर बन्यो हजार अर्ब डलरको पहिलो कम्पनी?
२० पुस - विश्व प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी एप्पलले एकै दिनमा ७५ अर्ब अमेरिकी डलरको नोक्सानी व्यहोरेको छ।
२० पुस - फेसबुकले म्यासेन्जर एप्समा नयाँ फिचर ल्याउने भएको छ। ‘डार्क मोड’ फिचर म्यासेन्जरमा पाइने भएको हो।
१९ पुस - चीनले चन्द्रमामा सबैभन्दा परको क्षेत्रमा रोबोटिक अन्तरिक्ष यात्राका सफलतापूर्वक अवतरण गराउन सफल भएको जनाएको छ।
आइफोन ११ मा थ्रीडी क्यामेरा हुने
१८ पुस - विश्वमा चर्चितमध्ये एक अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले आइफोन ११ मा लामो दुरीसम्म फोटो खिच्न सकिने थ्रीडी क्यामेरा जडान गर्ने भएको छ।
सात उपाय जसले स्मार्टफोन विस्फोट हुनबाट जोगाउँछ
१८ पुस - मोबाइल तथा स्मार्टफोन विस्फोटनको घटना धेरै सुनिन्छन्। फोनको ब्याट्री पड्केको खबरले मानिसमा डर समेत उत्पन्न गराउँछ।
हाम्रो नेपाली किबोर्डले ल्यायो नेपाली स्टिकर र इमोजीसहितको किबोर्ड
काठमाडौँ १८ पुस - नयाँ वर्ष २०१९ को अवसर पारेर हाम्रो नेपाली किबोर्डले नेपाली स्टिकर र इमोजीसहितको किबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ।
नोकियाले पाँच क्यामेरा भएको ‘नोकिया ९ पियोर भ्यू’ ल्याउँदै
१७ पुस - नोकियाले आफ्नो नयाँ मोडलको फोन ‘नोकिया ९ पियोर भ्यू’ चाँडै बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
के पहिलो स्वचालित कार चिनियाँ हुनेछ?
१६ पुस - कैयौं विज्ञले चीन स्वचालित कार निर्माण गरेर बेच्ने पहिलो मुलुक बन्ने अनुमान गरेका छन्।
दिल्ली १२ पुस - विश्व चर्चित सर्च इन्जिन गुगलका कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पिचइले ११ डिसेम्बरमा अमेरिकी संसदीय समितिको प्रश्नमा प्रतिक्रिया जनाए।
‘मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यात्री पठाउनु मूर्खता’
लन्डन ९ पुस - चन्द्रमाको परिक्रमा गरिसकेका एक अन्तरिक्ष यात्रीले मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यात्री पठाउनु मूखर्ता भएको बताएका छन्।
२६ मंसिर - बोइङले आफ्नो अत्याधुनिक बिजनेस जेट सार्वजनिक गरेको छ।
वासिङ्टन २४ मंसिर - अनुसन्धाताहरुले प्रारम्भिक तथ्यांकहरुको विश्लेषणबाट मोबाइलजस्ता स्मार्ट उपकरणको बढी प्रयोग गर्ने तथा भिडियो खेलमा बढी समय बिताउने बालबच्चाको मस्तिष्कमा ‘भिन्न संरचना’ भेटिएको बताएका छन्।
१९ मंसिर - भारतले इन्टरनेट पहुँचका लागि वजनदार ‘भू–उपग्रह’को सफल प्रक्षेपण गरेको छ।
१९ मंसिर - विश्वमा पहिलोपटक मृत महिलाको गर्भ प्रत्यारोपण भएकी महिलाबाट बच्चा जन्मिएको छ। मृत महिलाको गर्भ सन् २०१६ मा ब्राजिलकी एक महिलामा प्रत्यारोपण गरिएको थियो।
काभ्रेपलाञ्चोक १७ मंसिर - धुलिखेल नगरपालिकाले पर्यटकको सुविधाका लागि फ्रि वाइफाइ सेवा शुरु गरेको छ। आइतबार सरस्वती बजार परिसर (पार्क)बाट फ्रि वाइफाइ सेवा शुरु गरिएको हो।
सबैभन्दा गुणस्तरीय ‘हाइ डेफिनेसन’ टेलिभिजन च्यानल सुरुवात हुँदै
१५ मंसिर - जापानले शनिबार विश्वकै सबैभन्दा गुणस्तरीय ‘हाइ डेफिनेसन’ टेलिभिजन च्यानल सुरुवात गर्दैछ।
भारतले एकैपटक अन्तरिक्षमा पठायो ३१ भू–उपग्रह
१३ मंसिर - भारतले ३१ भू–उपग्रह एकै पटक अन्तरिक्षमा पठाएको छ। सतीश धवन स्पेस स्टेसन, श्रीहरीकोटाबाट रकेटमा ३१ वटा भू–उपग्रह एकसाथ अन्तरिक्षमा पठाइएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
चीनले समुद्र मुनी ‘बुलेट रेल’ कुदाउने
१३ मंसिर - समुद्रमाथि पुल बनाएर सनसनी मच्चाएको चीनले समुद्र मुनी ‘बुलेट रेल’ कुदाउने अवधारण सार्वजनिक गरेको छ।
सबै स्थानीय तहमा मोवाईल एप्लिकेशन संचालनकाे तयारी
काठमाडौं १२ मंसिर - सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्रै सबै स्थानीय तहमा ‘मोवाईल एप्लिकेशन’ संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।